Fitaovana makiazy, borosy makiazy, borosy fiharatana - Dongmei
Tongasoa eto DongShen
Dongshen endrika famolavolana makiazy vaovao napetraka 14 pcs silv ...
Volon'osy volon'osy volom-bolo makiazy matihanina 15 ...
Borosy makiazy matihanina mahafinaritra 13 pcs ...
Borosy makiazy matihanina avo lenta 12 pcs ...
Fanaterana haingana fandefasana volo mainty 11pcs volo p ...
Matihanina 8cm malefaka hoditra vita amin'ny hoditra ...
Solon-spaonjy boribory marevaka amin'ny hoditra malefaka po ...
Makiazy marevaka amin'ny hoditra miaro ny tontolo iainana ...
Vehivavy makiazy mando sy maina spaonjy spaonjy spaonjy ...
Fototra matihanina mando sy maina mifangaro amin'ny ...
Dongshen matihanina fisaka tampon ambony volo m ...
Dongshen borosy ambongadiny Blue Resin mitantana Dura ...
Dongshen lafo vidy premium habibiana tsy misy habibiana synt ...
Dongshen manaratra borosy tsara indrindra volo volo manga ...
Dongshen ambongadiny marika manokana manokana Qua ...
Dongshen avo lenta voajanahary matanjaka roa tarika b ...
Dongshen marika manokana ambongadiny resin h ...
Dongshen borosy avo lenta voajanahary super badge ...
Miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 100, ny orinasan'i Dongshen Covers dia mitontaly 15.000㎡. Manana ekipa mpivarotra matihanina izahay, ekipa teknika ary ekipa endrika mahery vaika, izay tsara amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana.
Ahoana ny fampiasana borosy fototra tsy misy marika borosy?
1. Ny tsara indrindra dia ny misafidy fototra misy rano. Na dia ampiasaina aza ny borosy fototra mba hamafana ny fototra, tsy ny firafitry ny fototra rehetra no afaka miborosy ny fototra tonga lafatra. Raha te hisoroka ny marika borosy fototra ianao dia tsara kokoa ny misafidy fototra misy rano. Satria ny fototra miorina amin'ny rano dia ...
Fa maninona ny lehilahy no mampiasa borosy fiharatana rehefa mankafy ny fotoana fanaratsiana?
Fony aho mbola tanora, dia hanaraka ny olon-dehibe mankany amin'ny barberhops nentim-paharazana notontosain'ny fanjakana aho, satria mbola tsy nitombo volombava akory tamin'io fotoana io, ary tsy nanana fluff akory aho, ka mbola manana fahatsiarovana lalina ny fizotran'ny fiharatana ny olon-dehibe mandry. Ireo dingana dia sahala amin'ny t ...
Ahoana ny fomba hisafidianana borosy fiharatana mety aminao?
Misy karazana borosy an-jatony eny an-tsena, ny iray mora indrindra dia 30, ary ny vidiny dia roa ka hatramin'ny telo arivo na avo kokoa aza. Toy izany koa ny borosy, inona no mahasamihafa azy? Ilaina ve ny mandany dolara an'arivony amin'ny borosy iray mandritra ny 1 minitra fohy isan'andro? Sa afaka mividy ...
Faritra fiharatra, borosy makiazy napetraka, Barber Shave, Manaova borosy, Mametraha makiazy borosy, Fitaovana borosy makiazy,